लेखक प्रा. डा. सुदन झा आइतबार, २५ बैशाख, २०७९
प्रथमतः ती विद्यार्थीहरुले उच्च पढाइ गर्नका निम्ति र एसइईदेखि +२ सम्म पुग्नका निम्ति छोटो समयका कोर्सहरु जसलाई “Bridge Course“ पनि भनिन्छ, त्यस्ता कोर्स गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ । यसले पछि ती विद्यार्थीहरुलाई +२ मा गएर पठनपाठनमा ठूलो मद्दत पुग्ने छ । प्रायः ती विद्यार्थीहरुका लागि लगभग ३ महिनाको समय खालि रहेको हुन्छ र यस्ता ब्रिज कोर्स गर्नाले समयको पनि सदुपयोग हुने र +२ का लागि अभ्यास पनि हुने देखिन्छ ।
आजभोलिका विद्यार्थीहरु करिअरको मामिलामा निकै सचेत रहेको देखिन्छ । अहिलेलाई उनीहरुका लागि विज्ञान संकाय, व्यस्थापन संकाय, मानवीय संकायजस्ता प्रचलित कोर्सहरुका लागि आफ्नो रुचिअनुसार +२ रोज्न सक्छन् ।
तर त्यसपछिका उच्च तहका परीक्षाहरु जस्तै इन्जिनियरिङ, मेडिसिन आदिका लागि पनि त्यहीअनुरुप तयार पर्दै लैजानुपर्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन जान्छ । त्यसैले एसइईपछि अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि ती विद्यार्थीहरुले निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु अति आवश्यक छ ।
आजभोलि डाक्टर र इन्जिनियरिङ गर्नेहरु थुप्रै भइसकेका छन् । काठमाडौंमा मात्रै ४५ वटा भन्दा बढी इन्जिनियरिङ कलेज र त्यसैगरी गल्लीगल्लीमा अस्पताल, नर्सिङ होम आदि खुलेका छन् । तर के सबै विद्यार्थीको चाहना भनेको डाक्टर र इन्जिनियरिङ नै हुन् त ?
यसो सरसर्ती हेर्दा र यो लेखकले करिब ३० देखि ४० प्रतिशत एसइई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुको मनोकांक्षा बुझ्न खोज्दा उनीहरु डाक्टर र इन्जिनियरिङभन्दा पनि कुनै नयाँ विषय गर्न चाहेको बताए र अझ विशेषगरी आजभोलि सबैको मुखमा रहेको आइटीसम्बन्धी नयाँ कोर्सहरु गर्न लालायित भएको अनुभव गरियो ।
प्रायः जसो विद्यार्थीहरुले रोज्ने विषय नै विज्ञान हो । यो विषय सकेपछि मात्रै उनीहरु डाक्टर र इन्जिनियरिङजस्ता स्नातक तहका कोर्स गर्न सक्षम हुन जान्छन् ।
यति मात्र नभई उनीहरु डाक्टर र इन्जिनियरिङबाहेक अरु पनि थुप्रै क्षेत्रमा जान सक्छन् । जस्तै नर्सिङ, पाइलट, फार्मेसिस्ट आदि । त्यसमाथि सरकारले पनि यससँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै कोर्सहरुका लागि बाटो खुला गरिदिएकाले पनि यसको क्रेज बढेको हो ।
यो कोर्स युकेको क्याम्ब्रिज विश्वविश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भएको कोर्स हो । आजभोलि प्रायःजसोको ध्यान यसमा बढ्दै गएको देखिन्छ । यो कोर्सअन्तर्गत विद्यार्थीहरुले थुप्रै विषयहरुमा पढ्न पाउने भएर पनि र आफ्नो रुचिअनुसारको विषयहरु पनि उनीहरुले पाउने हुनाले होला यसप्रति उनीहरुको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
यसको अर्को विशेषता भनेको कुनै पनि विद्यार्थीले फिजिक्स सँगसँगै सोसोलोजी पनि लिन सक्छन् । अर्थात् कुनै पनि संकायको कुनै पनि विषय उनीहरुले आफ्नो रुचिअनुसार लिन सक्छन् ।
नेपालमा फरेस्ट्रीको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने लाग्छ, नेपालीहरुले भन्दा विदेशीले बढी बुझेका छन् । लाखौँ डलर फरेस्ट्रीमा लगानी भइसकेको अवस्थामा पनि हामी नेपालीहरुको योग्यताका कमीले गर्दा विदेशबाट मानिसहरु आएर यहाँ शोध गरिरहेको देखिन्छ । अथवा फरेस्ट्रीसँग सम्बन्धित काम गरिराखेको देखिन्छ ।
नेपालमा हाल २ वटा शैक्षिक संस्था छन्, जसले फरेस्ट्रीसम्बन्धी आधिकारिक रुपले पढाउने तथा मान्यताप्राप्त सर्टिफिकेट दिने गर्दछन् – एउटा हेटौँडा र अर्को पोखरामा । यो डिग्री हासिल गरेर तपाईले विदेशीले ल्याउने विभिन्न प्रोजेक्टहरुको फरेस्ट्रीसम्बन्धी विभिन्न कामहरुमा आफ्नो रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र विचार गर्नुहोस् यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको एक दमै कमी छ ।
नेपालले पर्यटकीय दृष्टिकोणले फड्को मार्दै छ । उदाहरणस्वरुप यसका लागि हरेक २÷३ दिनमा नयाँ ठूलाठूला होटेल तथा रिसोर्ट खुलिरहेको कुराबाट हामी सबै अवगत नै छौं । तर, ती होटेलहरुका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको भने अत्यन्त अभाव देखिन्छ । यो विषयसम्बन्धी कलेजहरु नेपालमै उपलब्ध छन् ।
पढाइ गर्न मिल्ने त्यस्ता कलेज नाथम (नेपाल एकेडेमी या टुरिजम एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट) एउटा हो, प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पढाइ हुने यो कलेजमा यो डिग्री हासिल गरिसकेपछि विद्यार्थी आफैले बुझ्नेछन् । यसको स्कोप कत्तिको रहेछ भनेर ।
सुन्दा अचम्म लाग्ला किनभने आजको जेनेरेसन प्रविधितिर उन्मुख भइरहेको बेलामा यो संस्कृतको कुरा कहाँबाट आयो भनेर ? त्यसमा पनि लोप हुने अवस्थामा कसरी उल्लेख गरियो भनेर ? तपाई भाइबहिनीहरुलाई विश्वास लाग्दैन होला, जर्मनीमा मात्रै संस्कृतसँग सम्बन्धित १७ वटा विश्वविद्यालय छन् ।
अर्थात् नेपालमा यो विषयको महङ्खव जसरी न्यून भएर गएको छ, त्यही विषय नेपालबाहिरका देशहरुमा यसको महङ्खवले आकाश छोएको छ । कतिपय विदेशी देशहरुमा त यो विषय पढाइ नै हुन्छ र अझ कतिपय विदेशी भाषाहरु संस्कृतबाटै आएको भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेपछि त झन् यसमा ठूलो लगानी लाग्न थालेको छ । यस विषयमा ठूलो लगानीका साथ शोधहरु भइरहेका छन् ।
आउँदा दिनमा ती सबै शोधले नेपाललाई नै आफ्नो गन्तव्य बनाउने कुरामा दुईमत छैन । नेपाल नै मुख्य स्रोत हो भन्ने कुरा मानेर उनीहरुले भविष्यमा यही काम गर्ने प्रायः निश्चित छ ।
यो परिप्रेक्ष्यमा यो भाषामा ज्ञान हासिल गरेर दूरगामी अवसरलाई नियाल्न सकिन्छ । नेपालमै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ जहा“ शास्त्र तथा संस्कृतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पढाइ हुन्छ, एकपटक यसलाई पनि विचार गर्नुहोला ।
माथि भनिएजस्तै सिटिइभिटीले नै सञ्चालनमा ल्याएको पोलिटेक्निक कोर्सको पनि भविष्यमा उत्तिकै स्कोप छ । हाल ५ वटा विकाश क्षेत्रहरुमा पाँचवटा पोलिटेक्निकसँग सम्बन्धित पढाइ हुने संस्था छन् ।
साधारण औषधिसम्बन्धी ज्ञानदेखि लिएर फार्मेसी आदि जस्ता कोर्सहरु यसमा गराइन्छ । दिनानुदिन मेडिकल कलेज, क्लिनिक, नर्सिङ होम आदिहरु खुलेको अवस्थामा यो कोर्सले सानो तर महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्ने पक्का छ । यस्ता जनशक्तिको आवश्यकता मात्रै होइन, अपरिहार्य हुन जाने प्रायः निश्चित छ ।
यहाँ उल्लेखनीय विषय के हो भने हतारमा कुनै पनि विषय रोलिहाल्नुअघि विशेषज्ञसँग सही रायसल्लाह लिएर त्यो विषयको महङ्खव कत्तिको छ, भविष्यमा त्यसले कत्तिको रोजगारीमा टेवा पु¥याउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।
शिक्षामा प्रविधिको भूमिका बुझाउँदै वेद
बिहीबार, ३ चैत, २०७८